Sidee loo heli karaa dib u eegis tayo leh oo loogu talagalay boggaaga iyadoo leh xeelado shaqeynaya?
Dhammaan milkiilayaasha bogagga ee jecel inay hagaajiyaan darajooyinkooda waxay raadinayaan siyaabaha dib loogu celiyo boggooda internetka. Xidhiidhka soo socda ayaa ah qodobbada ugu muhiimsan ee boggaaga darajadaada iyo codadkaaga maamulka shirkaddaada. Dhisitaanka Xirfadlayntu waa geedi socod lagu abuurayo xiriiro cusub oo la xidhiidha bogagga kale ee la xidhiidha boggaga internetka iyada oo ujeedadu tahay in kor loo qaado awooda shirkadda waxayna soo jiidato gaadiidka badan oo la xidhiidha ilaha la xidhi. Nidaamka dhismaha ee xiriirka wuxuu loola jeedaa naqshadaynta bogga iyo in la sameeyo ka dib qaab dhismeedka bogga iyo hagaajinta adeegsiga, farsamaynta xirfadaha tayada, iyo naqshad sameynta user-friendly. Marka dhammaan hababka wax-ka-qabashada bogga lagu sameeyo, waxaa la joogaa waqtigii aad ku muujin lahayd goobtaada dhagaystayaasha balaaran. Dhismaha xidhiidhka wuxuu aad ugu eg yahay afka afka, kaas oo ku habboon istaraatiijiyada suuq-geynta.
Abuuritaanka dhammaan daafacyada waa mid aan macquul ahayn. Sidoo kale, waa sababta aad u baahan tahay inaad ogaato qaar ka mid ah qodobbada tayada guud oo ay ka mid yihiin:
Xiriirrada soo gudbiya waa kuwo awood badan marka ay ka yimaadaan ilaha webka la xiriira.
Qoraalkaaga maqnaashu waa inuu daboolaa dabiiciga wuxuuna la xiriirayaa mawduuca mawduuca ah iyo ereyga muhiimka ah ee laguu goynayo.
Qoraalka ku saabsan gadaashaada dhabarka waa inuu ahaadaa mid aad u muhiim ah oo faa'iido leh. Isticmaalayaasha ma aha inay soo jiidan karaan sida xayeesiinta.
Tirada xiriirrada soo socda ee bogga ku xiraya adigaaga.
bogga xiriiriyaha iyo sumcadda.
Bogga internetka ee isweydaarsiga PageRank.
Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso waxyaabahan soo socda markaad dhisayso isku xirka goobtaada:
Your backlinks waa in lagu dhisaa meelo badan si ay u muujiyaan Google in content aad u qadarinayso tirada dadka kala duwan. Waxaa intaa dheer, iyada oo la abuurayo xiriiro ku saabsan noocyo kala duwan, waxaad hagaajineysaa faahfaahinta xiriiriyahaaga oo aad ka dhigi kartaa waxoogaa organic ah.
Isku dheellitirka u dhaxeeya isku xirnaanta iyo isku xirnaanta
Dabcan, ujeedada udub-dhexaadinta aasaasiga ah ee websaydhka ugu wayn waa in la helo dib u celin dhab ah ku xir juice ilaha la xariira. Si kastaba ha noqotee, si loo abuuro muuqaal farsamo oo dib-u-eegid caafimaad leh, waxaad u baahan tahay inaad abuurto labada isku-xirneyn iyo kuwa kale ee dibadda ah.
Waxaad ubaahan tahay inaad sameyso qoraalo kala duwan oo isku xira xiriir kasta. Intaa waxaa dheer, qoraalkaaga ku dheggan waa inuusan la mid ahayn magaca calaamaddaada ama erayga muhiimka ah. Maskaxda ku hay in qoraallada isku midka ah ay u badan tahay inay waxyeeleeyaan sumcaddaada waxayna sababaan ganaaxyada Google.
Ka hor inta aan la cusbooneysiinin Google-ga weyn 2012-kii, dhammaan websaydhku waxay sameeyeen turjumaad ku saabsan tirada xiriirrada soo socda halkii tayada. Si kastaba ha noqotee, mar marka Google Penguin casriyeysey ayaa ciyaaray, dhammaan xayasiyaadka hore ee madadaalada ee madow ee SEO-ka ah ayaa ahaa mid wax ku ool ah.
Sidaa daraadeed, aan ka wada hadalno sidii dib loogu soo celin lahaa boggaaga internetka: waxay heli karaan isku-xidhka tafaftiridda oo kaliya adoo la xiriiraya bogagga sare ee PR ee la xiriira oo kaala xaajoodaan fursadahaaga dhismahaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u noqoto in aad gaari karto mulkiilayaasha boggaga badan iyo natiijada adigoo iska dhaga-tiraya ama helaya jawaab taban. Waxaad baari kartaa awoodda shabakadaha la xidhiidha isticmaalka neceb Websaytiyaha ama Majestic Source .